नेपमोलेको ‘चश्मा’ सार्वजनिक - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper नेपमोलेको ‘चश्मा’ सार्वजनिक	नेपमोलेको ‘चश्मा’ सार्वजनिक - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper नेपमोलेको ‘चश्मा’ सार्वजनिक
नेपमोलेको ‘चश्मा’ सार्वजनिक
नेपाली सांगीतिक बजारमा नयाँ गीत ‘चस्मा’ सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गीतमा गायक तथा संगीतकार चक्र बमको शब्द तथा संगीत रहेको छ । गीतमा अस्मिता अधिकारी र समिर आचार्यको स्वर सुन्न सकिन्छ । प्रिज्म डिजिटल स्टुडियोमा रेकर्ड गरेको गीतलाई श्यामश्वेत रसाइलीले मिक्सिङ/मास्टरिङ र योगेश काजीले संगीत संयोजन गरेका हुन्।
पश्चिमेली पहाडी भाकाको डान्सिङ नम्बरमा चक्रसँगै मोडल कविता न्यौपानेको अभिनय रहेको छ । गम्भीर विष्टको निर्देशन र कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियो आकर्षक बनेको छ । नेपमोलेको निर्माण गरेको यस म्युजिक भिडियोमा सरिता प्रजापतिको शृंगार, सम्झना बुटिकको पहिरण, पवन सुस्लिङको छायांकन र नविन निरौलाको सम्पादन छ ।